IWestcoast yasendle: IBritish Columbia iwayini kunye nokutya kwaselwandle
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Newsletter » IWestcoast yasendle: IBritish Columbia iwayini kunye nokutya kwaselwandle
Ukufumana isimemo somnyhadala kwiNdlu yeJames Beard yokutya / iwayini / ababhali bomoya kungcono kunokufumana isimemo kwiNdlu yeWhite House. Iminqweno emihle yokutya okumnandi, ukhetho olungaqhelekanga lwewayini kunye nabasebenzi abalindileyo abaqeqeshiweyo bazalisa iintsuku kude kube sesona siganeko.
Inkqubo ye-5 ka-Epreli ka-2017 kwiJames Beard House yayiyinto yokuqala kwiwayini kunye nokutya kwaselwandle eBritish Columbia ukubhiyozela i-150th Anniversary yaseCanada. Inkqubo yalungiswa ngu-Chef Ned Bell kunye nabahlobo bakhe. Xa iBell ingekho eNew York, uyi-Chef yesiGqeba seVancouver Aquarium kunye ne-Ocean Wise, umbutho onceda abathengi benze ukhetho lokutya kwaselwandle oluzinzileyo.
Igosa likaJames Beard
Ukongeza ekubeni ngumbhali wencwadi yokupheka, utitshala, umbhali wekholamu kunye nobuntu kumabonwakude, uJames Beard wayeyintshatsheli yokutya kwaseMelika. Abapheki abaziingcali kunye nabaqeqeshi kumzi-mveliso kunye neefestile kunye nabantu abathanda ukutya ukutya okumnandi, bafundiswa nguye, baqeqeshwa nguye kunye / okanye bakhuthazwa nguye - ukuba baxabise ubugcisa bezolimo.
Kulithamsanqa kubathandi bokutya ukuba iindevu zijike zangumdlali weqonga owoyikisayo (indawo yemidlalo yeqonga yayilihambo lakhe lokuqala lomsebenzi). Ebonisa umdla kwimikhwa, uBeard kunye nomhlobo uBill Rhode bavule iHors d'Oeuvre, umbutho wokutya owenze imali kwitheko lecocktail ngelo xesha. Ukusuka apho waya kufundisa, ebhala kwaye epapasha incwadi yakhe yokuqala, iHors D'Oeuvre kunye neCanapes (1940); Kwiminyaka emithandathu kamva wavela kwi-NBC Ndiyakuthanda Ukutya ukuba, ngokukaJulia Childs, iDean yeAmerican Cuisine.
UJames Beard House yinkulungwane ye-19 ye-NYC ngasentshona kwindlu yedolophu eyindawo yokuhlala yombhali owaziwayo kunye notitshala wokupheka. Okwangoku likomkhulu leJames Beard Foundation kwaye indawo isetyenziselwa imicimbi yabucala kunye neeklasi.
I-BC Wines, iMiles Prodan, i-CEO kunye noMongameli we-BC Wine Institute
Iwayini zaseBritish Columbia zithengiswa kwiBritish Columbia Wine Institute ukusukela ngo1990 njengenxalenye yelinge likarhulumente lokuphuhlisa ishishini lewayini elikhuphisanayo. Kulo nyaka umbutho ubhiyozela iminyaka engama-27 yeVintners Quality Alliance (VQA), umgangatho oqinisekisa ukuba iwayini yenziwa nge-100 leepesenti kwiidiliya ze-BC.
Umgangatho we-BC VQA yeewayini uye waqwalaselwa kwilizwe liphela ngokhuphiswano lwamazwe aphesheya kwaye indawo ekuyiwa kuyo ibone ukukhula kwezokhenketho lwewayini. I-BC ikwafumene ukwanda kweefama ukuya kwiivenkile zokutyela, uphuhliso lweendawo zokuhlala ezikhethekileyo, inani elikhulayo lokutyelela iwayini kunye neminyhadala yeewayini.
Ukuthunyelwa kwewayini ye-BC kukhule ukusuka kwi-5.7 yezigidi (ngo-2011) ukuya kwi-19.3 yezigidi (2016), ukonyuka kwama-237 eepesenti. Ishishini liphuhlise ukusuka kwimveliso yeediliya ezili-17 ngo-1990 ukuya kuma-278 namhlanje. Phantse sisigidi sabakhenkethi bandwendwela iiwayini ze-BC ngonyaka. Umzi mveliso wewayini we-BC unikela nge-2.8 yezigidigidi zeedola kuhlumo loqoqosho lwephondo rhoqo ngonyaka.
Ukuzisa izakhono zabo zokupheka ukubhiyozela i-150th yokuzalwa kweCanada:
UJohn Johnson, Ihotele yamaXesha amane, NYC
USean Murray, ihotele yamaXesha amaNne, eChicago
Seamus Mullen, Tertulia kunye no-El Colmado, NYC
UShaun Acosta, ihotele yamaXesha amane, kwiDolophu yaseNew York
Ama-Foodies angama-40 aphezulu angaphantsi kwama-40
Oyena mntu wayehlala yedwa kulo msitho yayinguKurtis Kolt okhethe iwayini nge-premium BC VQA. Njengo-BC Sommelier woNyaka (2010), uKolt yenye yeeVieties eziPhezulu ezingama-40 zaseVancouver ezingaphantsi kwama-40.
Ngaphezulu kwe-100 zeentatheli, abaphathi besonka, abapheki, abathengisi bewayini nabathengisi bamenyiwe ukuba bazokufumana ithuba lokutya elinezifundo ezintlanu, eligcwele ngamalaphu etafile amhlophe, kunye nentaphane yeefolokhwe neemela, ezifanelekileyo isidlo.
Iindwendwe ezaziwayo zibandakanya:
UKevin Zraly, owayesakuba nguMlawuli weWine yeWindows kwiNdawo yokutyela yeHlabathi (1976-2001). Ukusukela ngo-1976 ufundise iiklasi kwiWindows kwiSikolo seWayini yeHlabathi (iMarriott Marquis Hotel, NYC), ephumelela ngaphezulu kwabafundi abangama-20,000 2011. Ungumbhali wencwadi enkulu ethengisa iwayini kwaye wafumana imbasa ka-XNUMX kaJames Beard Lifetime Achievement.
UMichael Yurch, uMongameli weQela leBluest Sky, ngowayesakuba nguMongameli weSherry-Lehman. Okwangoku ulilungu leFakhalthi kwiYunivesithi yaseSonoma State, iziko eliphambili kushishino lwewayini. Ukongeza, ulilungu elisekwe kuManyano olungekho sikweni lokuGcina ukuFikelela kwabaThengi kwiWayini, iqela elenzelwe ukukhusela nokwandisa amalungelo abantu baseMelika abathengisela iiVintner iimveliso zabo.
Ukongamela i-bash yokuzalwa yayinguJose Lucio, Maître d'Hôtel.
Isiganeko sewayini / sokutya
• Ikhosi yokuqala
IGeoduck kunye nePacific Scallops Crudo, iBottarga, iGazi leorenji
Idibene ne-Steller kaJay Brut 2010, BC VQA Okanagan Valley
Emehlweni, iindiza ezikhanyayo kunye neencinci, ukubengezela okuqaqambileyo. Impumlo ifumanisa iingcebiso ze grapefruit, iiapile eziluhlaza kunye nobuncinci phantsi kwesambulela sobumnandi. Ukucoceka, ukoma okugqityiweyo.
• Ikhosi yesiBini
I-Albacore Tuna Tataki enee-ertyisi, i-Asparagus, iArtichokes, iCitrus Vinaigrette
Idibene ne-Little Farm Winery ye-Mulberry Tree Vineyard Riesling 2015, BC VQA Similkameen Valley.
URhys Pindar, inkosi yewayini
Kwimpumlo, ilamuni, ikalika kunye nama-apile aluhlaza aneengcebiso zetranger kunye nesiqholo. Kwinkalakahla, iziqhamo kunye ne-citrus ziyacothiswa bubuncinci. Ukugqitywa kwethambo elomileyo kuphakanyiswa yi-asidi ephezulu kunye nesiseko sezimbiwa.
I-West Coast Mussel kunye ne-Clam Soup, i-Fennel Pollen, iMaple
Idibene neBlack Hills Estate Winery eChardonnay 2015, BC VQA Okanagan Valley
Kwimpumlo - amapere amatsha kunye nama-apile kunye nobumnandi obenziwe ngobuncinci. Inkalakahla iyonwabile ngamaphayinaphu, kunye nama-apile amatsha ane-oak ene-toast kunye ne-vanilla e-creamy kunye nengcebiso ye-caramel kunye ne toffee.
• Ikhosi yesine
I-BC Salmon, amaMushroom, iiCelery Roots kunye neentliziyo, ukunxiba okumnyama kweTruffle
Idibene neBordertown Vineyards kunye neWest Winery iChabernet Franc 2014, BC VQA Okanagan Valley
Impumlo iyonwabile ngecuba, iziqholo ezimnyama kunye nepepile eluhlaza ngombono weminti. Iincasa zeberry zidibanisa kakuhle nee-tannins ezi-supple kwaye zinika ukugqiba okumnandi kunye nokude.
UCindy Ferrie noMohan Gill, umnini kunye nomlimi wezityalo zeBordertown Vineyards kunye neWest Winery ebekwe e-Okanagan Valley, eBritish Columbia
• Ikhosi yesihlanu
I-Haida Gwaii Halibut eyosiweyo, i-Caramelized Onion Crema, i-Parsnip Foam, i-Pepper emnyama, iMaple kunye neJus yenkukhu egcadiweyo, i-Vancouver Island yoLwandle lweTyuwa.
Idityaniswe nePoplar Grove Winery Syrah 2013, BC VQA Okanagan Valley
Ubomvu ngokungqombela kwiliso. Kwimpumlo, iiblueberries, ii-violets, iziqhamo ezivuthiweyo kunye neetsheri, ii-cranberries, ii-clove kunye nomsi. Inkalakahla ifumana iiplamu ezibhakiweyo kunye nepepile emnyama ngengcebiso ye-caramel. IiTannins zithambile kwaye zonyusa ukutya kweSyrah. Ukugqibezela okugcweleyo kongeza omnye umaleko omnandi weenkumbulo.
Iitshokholethi, iKelp, iCaramel kunye neeKumquats
Ukudityaniswa kweBench 1775 Winery Paradise Ranch Viognier Ice iwayini 2014, BC VQA Okanagan Valley
Le icewine imnandi ngokungummangaliso yenziwe ngeidiliya zeViognier, ezivunwa kwincopho yeqondo lobushushu elibandayo le - 15 zeedigri C. Isiqhamo nesigcwele isiqholo icewine inyuswa ngamacebo eapilkosi, iguava, ipayinapile kunye nombala weorenji. Amabhaso abandakanya: I-2016 yeWayini yeCandelo loMdiliya oMantla eNtshona; Ukhuphiswano lweWayini laseLos Angeles lwaMazwe ngaMazwe lowama-2016, iGolide; Ukhuphiswano lwaMazwe ngaMazwe lweDan Berger, iSilver; Ukhuphiswano lweWayini leSan Francisco lwaMazwe ngaMazwe lwango-2016, iSilver kunye ne-InterVin yeMbasa yeWayini yeHlabathi, iBronze.
Ngolwazi olongezelelweyo kwi-BC Wines: iwayinibc.org
Ukuhamba njengomthwalo wokukhathalela uthando
Esinye isizathu sokundwendwela e-Itali: Amabhaso osaziwayo ewayin asuka kwiTre Bicchieri (3 Glasses)
Iimpawu zesifo sesibindi esinamafutha, iBiopsy yesibindi, kunye ...
Zeziphi iindawo zokufikela zase-US ezibonelela ngeyona ngxondorha yakho...
I-IATO ibhenela kwiNkulumbuso yoncedo ngeIndiya...
Isicelo esitsha seChiza soNyango lweSeli engeyiyo encinci...
IMarike yoLondolozo lweFabric ka-2022 Abadlali abaPhambili, Uhlalutyo lwe-SWOT...